Dhameystirka ciyaarta 'filimka filimka - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo »Dhamaan ciyaarta 'spoiler' - BGR
Dhammaadka ciyaarta 'spoiler' - BGR
Monday yaab, ugu dambeyntii shaaca ka qaaday duurka muuqaalkan ka soo jeeda filimka ugu horreeya ee filimka ah ee aanu maqalnay wax badan todobaadyadii dhawaa. Ka dib markii ay soo bandhigeen saddex dhacdo oo khaas ah, Marvel ayaa sii daayay version markii lagu jiray Good Morning America et Jimmy Kimmel Live . Waxaan si fiican u falanqeeyay tan iyo kulanka saamileyda Disney bilowgii March, inkastoo ay xiiso badan oo dheeraad ah si ay u daawadaan footage iyo maqli wadahadalka ka badan in uu akhriyo waxa ku saabsan. Oo waxaa soo baxday in ay jiraan qaar ka mid ah dacwad agagaarka goobta oo dhan waa, sida taageerayaasha qabaa inuu yahay Baabbi'iyihii xariif ku qarsoon clip ah. Ka hor inta aanad sharxin, waxaan ku xusuusinayaa in dhamaan filimooyinka ka soo baxay Rakaabka: Dhamaan waxaa ku jira luminta filimka. Sidaa darteed, haddii aadan rabin inaad aragto mid ka mid ah clips daabacay Disney iyo Marvel, si ka fiican u ilaali waxa la raacayo.
Haddii aadan weli arkin cambaareynta, hubi inaad mar kale u akhrido, ka dibna kordhiso xaddiga ugu sarreeya agagaarka 0: daqiiqo 48:
Haddii aad maqasho cod ficil ah Waxaan ahay telepathic sida Thor madax u ah Captain Marvel leh aragti yar oo hanjabaad ah, ka dibna aadan ahayn midka kaliya. Waxaan sidoo kale maqlay wuuna maqli karaa hadda. Samee dhowr jeer oo kale oo aad ku qanacsan tahay in qof uu leeyahay. Taageerayaasha Reddit iyo YouTube waxay sidoo kale ogaadeen oo isku dayeen inay ka fikiraan waxa ay macnaheedu noqon karto.
Ma tahay ukun ciid ah? Miyuu Ruushku abuuray codka si uu u tixgeliyo awood cusub oo Captain Marvel ah? Haddii maya, qof kale ma u sheegaa ereyadaas? Waxaa laga yaabaa in lagu magacaabo Scarlett Witch ama unug aan la aqoon
Waxay u egtahay mid xiiso leh, laakiin waxay u maleyneysaa inay ku fekerayso, waanan sharxi doonaa.
Marka hore, Koofiyadu waa ka yaaban tahay liistada telefoonada. Anigu ma ihi khabiir Carol Danvers iyo awoodeeda badan, MCU weli wali wax kasta oo ay qaban karto, laakiin, sida laga soo xigtay profile this Fandom profile Telepathy waa mid ka mid ah jilicsanaanta jilicsan. Intii aad isticmaali laheyd telepathy in ay faa'iido, waxaa laga yaabaa in dhaawac.
Telepathy sidoo kale ma aha muuqaal of Kree, kaas oo sidoo kale waa in la tixgeliyaa maadaama ay leedahay Kree DNA. Kree Sirdoonka Sare dhinaca kale, waxay leeyihiin awood telepathic.
Source Image: Marvel Studios .
Marka labaad, waxa telepathath uu ku imaan lahaa qof isagoo ku hadlaya wax nacas ah Waxaan leeyahay telepathy . Dabcan, waa inaad u sheegtaa bartilmaameedkaaga inuu keligiis ku maqli karo, laakiin waxaad u maleyneysaa inaad ka fiican tahay tan. Waxay hubaal ka dhigan doonaan in aad dhab ahaan leedahay telepathy inta ay ku maqlayaan adiga oo ku hadlaya madaxaaga.
Laakinse qof kale sheego jumlada rooggaga. Ruushka miyuu halis ugu jiraa inuu maqlo? Ka dib oo dhan, isbeddelka codka goobta ayaa xitaa ka sahlan marka la ciyaarayo fiidiyowga si uu u qariyo kuwa garaacaya, waxaana mar hore ogaanay in ay ku raaxeysteen Dagaalkii Infinity et Endgame video si ay u qariyaan kuwa garaacaya.
Aynu iloobin in Marvel uu si aad ah uga taxaddarayo faahfaahin kasta oo ka mid ah filimadan. Wax walba waxa si khaas ah loogu talagalay inay u shaqeeyaan sheeko khaas ah, iyo sidoo kale dhammaan MCU. Sidaa daraadeed maahan in qofkasta oo Marvel uu ka lumi doono ukunta Easter-ka ah adigoo tusinaya filin cajiib ah aduunka. Sababtoo ah haddii qof leeyahay in aan leeyahay telepathy mana ahan Captain Marvel, waxay u badan tahay in dad badani maqli doonaan codka oo u dhaqmaan si waafaqsan. Qofkasta oo sawirka ku arkay, fadhiga saamileyda, CinemaCon ama markii ay la kulmeen saxaafadda, faahfaahsan qaybaha waaweyn ee goobta . Dadkii weerarku ka socday shirka ma aysan hadlin codka dahsoon. Feejignaan Thanos, haddii qof uu ku fekero inuu leeyahay awood ujeeda telepathic oo aad ka maqasho gudaha gudaha dhismaha Avengers, waxaad samayn lahayd wax. Qaado Thor, tusaale ahaan. Marka laga reebo xaqiiqda ah in uusan ujeedada madaxa u jeedin, ama uu cunsuriyadeeyo inta uu qorsheynayo in uu dilo Thanos, wuxuu "jecel yahay kan". farriimaha telepathic ee nooca kasta inta lagu jiro imtixaanka. Captain Marvel waa qabow.
Thanks to Redditor, khabiir ku ah injineerna codka, waxaan hadda leenahay caddayn in tani ay tahay xad-dhaaf weyn. Dhawaaqyo badan ayaa isku yimid si ay u xakameeyaan maskaxdeena iyagoo rumaysan in qof uu yiri: Waxaan leeyahay telepathy goobta 4 Rakaabka . Waxaan daabici doonaa sharraxaad faahfaahsan laga bilaabo GMsGrimoire buuxda hoos ku qoran:
Aynu sariirta saarno.
Wax yar ayaan ku shaqeynayey injineerna codka oo waxaan go'aansaday in aan sameeyo waxoogaa shaqadan ah "cod". u badan tahay in aan maqlay oo ku saabsan jeer 100 qaybtan halka saxo xawaaraha loo maqli karo iyo hagaajinta xawaaraha loo maqli karo, iyo waxaan soo gabagabeeyey in dhawaaqa hore (mid ka mid ah in lagu sameeyo dhawaaqa "I" in dadka waxa ay maqlaan) waa bilowgii a / Thor Guux neefta. mawjadaha ay u dhigmaan aad u dhow in ay la taahaysaa annana waannu ku maqli dambe ee clip ka dib waxay muujinaysaa Stormbreaker.
Sababtoo ah u dhawaanshahooda, waxaan gooyay neefkii ugu danbeeyay ee Thor ee rinjiga 2 iyo kan kumbuyuutarkan. Isticmaalka FIR (ama Jawaab Bixin Dhameystiran) Jawaab, waxaan kala jari karaa ama "soo saaraa" isbeddellada Tor's ee ka yimaada trailer 2 iyo kumbiyadan. Waxaan sidoo kale soo saari karaa isbeddellada laga bilaabo buuqa asalka ah iyo muusikada oo bilawda isla markii Thor uu ku soo galo clip cusub. Maxay la mid yihiin marka dadku maqlaan "cod"?
Taas ka dib, ma hayso wax badan oo aad ku sheegto codka maxaa yeelay inta badan jadwalka ayaa laga saaray. Waxaa xiiso leh, weli waxaa jira maqal ah qaar ka mid ah maqalka ay maqleen dadka sida "Waxaan haystaa telepathy". Kuwani waa labo murashax oo kala duwan oo aan u malaynayo in ay sameeyaan dhawaaqyada "T" iyo "L" oo dadka maqlo. 19659004] Gaaban, waxaan u maleynayaa in codka aan maqalno iyo in "I" uu yahay Thor's neef / neef. Haddii aad si taxadar leh u dhageysato, waxaad maqli kartaa inay sii socoto qaybta "codka"; oo ka duwan "waraaqo" kale oo waxay u badan tahay inuu sidoo kale ku jiro "E" dhamaadka "telepathy". Labada dhibcood ee aan kor ku soo sheegnay ee ku hadhay ("T" iyo "L") waxay u badan tahay inay maqal yaryar ka soo jeedaan ama wax kale, laakiin waxay ku xiran tahay in dhawaaqyadaas aan la xiriirin midba midka kale iyo maskaxdeenaga bani-aadamka waxay isku dayaan inay iyaga u fahmaan (waa arrin horumar ah).
Sidoo kale waxaan noqon karaa khalad. Waxaan rajeyneynaa inaan ka ogaanno maalmaha 17.
TL; DR: Kadib wax yar oo sahlan, waxay u badan tahay in aynu maqalno taxane taxane ah oo ka dhigaya "faqri". Xaaladda kale ee Yani / Laurel.
Edit / Update: Horumarka cusub markaan sii waday inaan qodo. Ilaa iyo hada, waxaan fahamsanahay in codka "aniga" ka yimid bilawgii Thor ee uu kudhacay iyo in uu "Y" ku calaamadsan yahay dhamaadka heeshiisii. Haddii aad u fiicantahay, Thor gacmihiisa gacmaha (waa inaad ka takhalusi kartaa eeyahaas eeydu dharbaaxaan). Anigu waxaan awood u yeeshay inaan dhawaaqa ka saaro gacmihiisa iyo seddexaad oo isku dhafan oo leh "P" oo ah "telepathy". Taasi waa sababta aan u maqalno "P".
Intaa waxaa dheer, ka dib marka la soo saaro isbeddellada sare ee leh FIR kale, waxaa jira arrimo badan oo ah codad badan oo hooseeya oo wax ku biiriya, fikradayda, codadka "T" iyo "L". Waa inaan tijaabiyaa dheeraad ah, laakiin tani waa aqoonsi ah qaabka aadanaha.
Waxaa jira waxyaalo qaawan oo qarsoodi ah oo qarsoodi ah ee "Rakaabka: Endgame", waxaannu ku dhawaad ​​ku seegnay